जुन ताण्डव मोतिपुरमा देखियो........ | Ekhabar Nepal
विकासको मानक हेर्न रुपन्देही आउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको वताउँदै आउनुभएका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई शुक्रवार दिउसो मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रमले भने गासमाथि ढुंगा लागेको छ ।
पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र वनाउने घोषणा गर्नुभएका पौडेलले गृह जिल्लाको शिलान्यास कार्यक्रमका अवसरमा कालो झण्डा, नारावाजी र ढुंगामुढाको सामना गर्नुपर्यो । प्रस्तावित क्षेत्रमा उद्योग बनाउँदा अस्थायी वसोवास गरेकाहरु वेघरबार हुने आशंका गर्दै स्थानीयले अवरोध गरे । यद्यपि अवरोधकावीच अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको छ ।
आँफूहरुले जोतभोग गरेको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएको भन्दै मोतिपुर क्षेत्रका स्थानीयले सुरुदेखी नै विरोध जनाउँदै आएका थिए । यद्यपि त्यसो नहुने कुराको विश्वास नेकपाका नेताहरुले ब्यक्त गरेका थिए । तर, कतिपय पार्टीका नेता तथा सांसदहरुलेनै शिलान्यास कार्यक्रम हुन नदिने रणनीति तय गरेका कारण असहज अवस्था आयो । मन्त्री भट्ट र नेपाल औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर वस्नेतलाई सांसदहरुलेनै शिलान्यास कार्य नरोके वितण्डा मच्चाउने धम्की दिनुभएको थियो । कार्यक्रम पश्चात् पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री भट्टले त्यो संकेत गर्नुभएको थियो । उहाँले पर्दा पछाडिवाट धम्की आएपनि आफूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
भट्ट पश्चात् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि सो कुरालाई संकेत गर्नुभयो । पौडेलले पर्दा पछाडिवाट हैन सामुन्ने आउन आग्रह गर्नुभयो ।
खासगरी सांसद घनश्याम भुषालले यसवारेमा बढी आपत्ति जनाउनु भएको कुरा केही स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले ब्यक्त गरेका छन् । उहाँ मन्त्री हुँदा यसवारेमा सिन्को भाँच्नुभएन र अहिले वाहिर आएपछि पनि वनाउने विचारमा हुनुहुन्न । पालिका प्रमुखहरुको विचारमा स्थानीयले वसोवासको कुरा गरेका छन् भने त्यसको समाधान वार्तावाटै गर्न सकिन्छ । खासगरी सियारी, सुद्वोधन, तिलोत्तमा र बुटवल गरी चारवटा पालिका भित्र पर्ने भएकोले सवैले आ–आफ्ना पालिकामा वस्ने नागरिकका समस्या समाधान गरेमा सहज हुने अवस्था छ ।
यसका लागि चारवटै पालिका तयार देखिन्छन् । यो औद्योगिक क्षेत्रको धेरै भाग सांसद घनश्याम भुषालको पर्ने भएकोले उहाँले समन्वय गर्ने हो भने सहजै निकास निस्कने आँकलन स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधिहरुको छ । यदि उहाँले पहल नगर्ने हो भने पनि वार्ताको टेवलमा वसेर यसको निकास निस्कन्छ । तर, अहिले निकासभन्दा विनासको वाटो लिएको पाइन्छ ।
विकासका काममा सत्तामा हुँदा वा नहुँदा पनि जनप्रतिनिधिले पहल गरेनन् भने त्यसको जवाफदेही को हुन्छ ? अहिले यो गंभीर प्रश्न उठेको छ । जवकि सरकारी जग्गामा वसोवास गर्दै आएपनि उनीहरुलाई पूर्ण रुपले निषेध गर्ने पक्षमा कोही पनि छैनन् ।
पत्रकारसंग वोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सवैको वसोवासको ब्यवस्था गर्ने दायित्व यही सरकारसंग भएकोले कोही कसैलाई उत्तेजित नहुन आग्रह गर्नुभएको छ । मोतिपुर आसपासका नागरिकको जिम्मा सरकारले लिएको छ, उहाँहरु सवैलाई जमिनको मालिक वनाउने काम सरकारकै हो, मन्त्री पौडेलले भन्नुभएको छ । हुन पनि अहिले हरेक पालिकावाट सुकुम्वासीको लगत संकलन गर्ने, अब्यवस्थित वसोवासको तथ्यांक लिनेजस्ता काम भइरहेका छन् । भूमि आयोगले यस जिल्लामा पनि काम शुरु गरेको छ । सरकारले कसलाई कसरी जग्गा दिन सकिने भनेर नीति वनाइसकेको छ । त्यस अर्थमा पनि कोही कसैलाई भूमिहिन वनाउने अवस्था आउँदैन ।
यो परियोजना रुपन्देहीका लागि एक खालको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पचास हजारलाई रोजगारी सृजना गर्ने यो औद्योगिक क्षेत्रले रुपन्देहीलाई आर्थिक केन्द्र वनाउने भएकोले पनि यसलाई अगाडि वढाउन अत्यावश्यक छ । यो परियोजना आधुनिक हो । यसले सुन्दरीकरणको काम पनि गर्छ । प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्छ । ठूला उद्योग अझ विदेशी लगानीका उद्योगहरुसमेत आउने वातावरण वन्नेछ ।
प्रादेशिक राजधानी नपाएर छटपटाएका यस क्षेत्रका जनतालाई एक प्रकारको राहत वा क्षतिपूर्ति हो । त्यसैले पनि यसलाई पछाडि धकेल्नु भनेको रुपन्देहीको विकासलाई अवरुद्व गर्नु हो । औद्योगीकरण हुन नदिनु हो । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने कामलाई असफल वनाउनु हो । रोजगारी सृजना हुन नदिनु हो । समग्रमा राष्ट्र निर्माणलाई पछाडि धकेल्नु हो । कुनै पनि जनप्रतिनिधिले यस प्रकारका काम गर्लान् भनेर अनुमान गर्न त सकिन्न । तर, विडम्वना यी सवै काम भइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका केही ब्यक्तिहरुले यसलाई मुद्वा वनाउने कुरा स्वभाविक होला । विपक्षीले वनाएको र गरेको देख्दा अलिकता जलन हुनु अन्यथा हैन । कतिपयले यसलाई भजाएर जनविरोधी काम गरेको पनि भन्न सक्छन् । तर, सवैले हेक्का राख्नुपर्छ यो काममा भएको अवरोधले दीर्घकालिन रुपमा कसैको भलो हुनेवाला छैन । यदि राजनीति स्थायी रुपमा गर्ने र जनताका वीचमा जाने हो भने भोलि लज्जास्पद हुने अवस्था आउने छ । ढिलो चाँडो जनताका वीचमा गएर माफी माग्नुपर्ने छ । भोलि यस्तो पनि आउन सक्छ कि अहिले जसले विरोध गरेर वहादुरी देखाएका छन् उनैले माफी मागेर हिड्नु परोस् ।
यो अवस्था यस कारणले आउनेवाला छ कि जनतालाई नाङ्गै वनाएर यो सरकारले काम गर्ने छैन । यो कुराको प्रतिवद्वता अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री र नेपाल औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर वस्नेतले जनाइसकेका छन् । जव यो कुरा जनताले वुझ्नेछन् त्यस पश्चात् तीनै नेतालाई धिक्कार्नुपर्ने छ ।
बरु यसमा स्थानीयहरुले के वुझ्न आवश्यक छ भने हाल जे जति जमिन ओगटेर वसिएको छ त्यति जमिन भोलि नपाइन सक्छ । तर, आज र भोलि हुने मूल्यांकन हेर्नुपर्छ उनीहरु नोक्सानमा पर्ने छैनन् । रोजगारीका अवसर पनि उनीहरुलेनै वढी पाउन सक्नेछन् । अप्रत्यक्ष लाभ पनि उनीहरुले पाउने छन् ।
एउटा आयोजना सञ्चालनको अवस्थामा ल्याउने भनेको धेरै ठूलो मेहनत पश्चात् मात्र हो । प्रारम्भिक अध्ययन, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यस पश्चात् वजेटको सुनिश्चितता गर्नु सामान्य विषय हैन । यति गरेर तयारी अवस्थामा पुगेका आयोजनालाई एकैपटक विथोल्न सहज छ । यसो गर्न मेहनत चाहिदैन । केही उच्छृंखल ब्यक्तिलाई एक दिनको पालन पोषण गरेमात्र यस्ता कामलाई निस्तेज गर्न सकिन्छ । के यस्ता काम कुनै जनप्रतिनिधिले गर्न सक्छ ? त्यो पनि जनताले थाहा पाउने गरी ।
राष्ट्रिय रुपमा रुपन्देही जिल्लाको एक प्रकारको इमेज वनेको छ । त्यो भनेको विकास हेर्न, पूर्वाधार हेर्न, चौडा सडक राजमार्गमा मात्र हैन गाउँमा गएर हेर्न, राष्ट्रिय महत्वका सभा हल, प्रदर्शनी केन्द्र आदि हेर्न, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हेर्न, डेढ वर्ष पछि बुटवलवाट देखिने दुइवटै डाँडामा केवलकार गएको हेर्न, एक शय विगाहामा वन्ने आधुनिक विश्वविद्यालय हेर्न, २ शय विगाहामा वन्ने मेडिकल कलेज हेर्न, वेलवास–बेथरीको आधुनिक सडक हेर्न, तिनाउ–दानव करिडोरको नमुना राजमार्ग हेर्न, कृषिको प्रशोधन केन्द्र हेर्न र यस्तै यस्तै कुराले रुपन्देही आकर्षणको केन्द्र वन्दै गएको छ ।
यसै मेसोमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र र त्यसभित्र रहेका विदेशी र स्वदेशी लगानीका ठूला ठूला उद्योग हेर्न पनि रुपन्देही आउने वातावरण वन्दैछ । के यी र यस्ता वातावरण वनाउन नचाहने हो हामीले ? उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले त भन्नुभयो, रुपन्देहीलाई विकास नचाहिने हो भने सुदुर पश्चिम पठाउँ । त्यतातिर उद्योगीलाई रातो कार्पेट विछाएर स्वागत गरिन्छ ।
वास्तवमा विकास प्रक्रिया कसैको उन्मादले रोकिदैन भन्ने कुरा रुपन्देहीकै केही दृष्टान्तले वताउँछ । बुटवल राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक केही वर्ष ढिला अवश्यै भयो तर, रोकिएन । कालिकापथको सडक पनि रोक्ने प्रयास धेरै भयो रोकिएन । बुटवलको सुखानगर क्षेत्रमा खानेपानी अवरोध भयो । झुम्साखोला आयोजना अरबमा वन्दैछ ।
फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बुटवलमा पटक पटक रोकियो परिणाम जिल्लाभरीकै लागि सैनामैनामा आधुनिक फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बन्दैछ । वन्दैछ मात्र हैन पर्यटक तान्नेगरी वन्दैछ । जव सो प्रशोधन केन्द्र बन्नेछ शायद त्यतिवेला जसले दिएन उनीहरु पश्चातापमा पर्नेछन् ।
र अन्तमा हरेक जनप्रतिनिधिहरुले हेक्का राख्नुपर्नेछ–आफूले गौरव गर्ने लायक काम जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र वा आफै वसेको ठाउँमा के गरियो ? यसको हिसाव किताव पनि जनताले अवश्यै राख्नेछन् ।